किन उभिएर पानी पिउनु हुँदैन ? कारण यस्तो छ - Everest Dainik - News from Nepal
किन उभिएर पानी पिउनु हुँदैन ? कारण यस्तो छ
स्वस्थ शरीरको लागि पानी एकदम आवश्यक छ । तर पानी कति र कसरी पिउने, त्यसले पनि शरीर स्वस्थ हुनु नहुनुमा फरक पार्छ।
उभिएर पानी पिउँदा शरीरलाई नोक्सान पुग्न सक्छ । आयुर्वेदको अनुसार उभिएर पानी पिउँदा शरीरमा नकारात्मक असर पर्छ। जब हामी उभिएर पानी पिउँछौँ, शरीरमा तरल पदार्थको सन्तुलनमा बाधा पुग्छ। यो बाधाले शरीरमा विषाक्त पदार्थको उत्पादन र खाना अपाचनको सम्भावना बढाउछ।
उभिएर पानी पिउँदा पानी नछानिई सिधै शरीरको तल्लो भागमा जान्छ। यसले शरीरमा अशुद्ध तत्व जम्मा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अशुद्ध तत्व धेरै मात्रामा जम्मा भएपछि मृगौलामा हानी पुगी मिर्गौलाले ठिकसँग काम गर्न सक्दैन।
एक अध्ययनको अनुसार उभिएर पानी पिउँदा पानीको प्रवाह उच्च हुन्छ। उच्च प्रवाह भएको पानी हावासँगै शरीरमा प्रवेश गर्दा शरीरको सबै प्रणालीमा असर गरी शरीरमा गाँठा देखिने र जोर्नीमा पीडाको कारण बन्नसक्छ। लगातार उभिएर पानी पिउँदा मुटु र फोक्सोमा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ।
अल्सर हुने सम्भावना
उभिएर पानी पिउँदा एसोफेगसको तल्लो भागमा अधिक नोक्सान पुग्छ। जसको कारण पेटमा अल्सर हुने सम्भावना बढ्छ।
शरीरमा हुने पीडामा वृद्धि
उभिएर पानी पिउँदा शरीरमा बढी दबाब परी शरीरको जैविक प्रणालीमा प्रभाव पर्छ। त्यो प्रभावले शरीरको भइरहेको दुःखाइमा वृद्धि हुन्छ। र शरीरमा यसै पनि पिडा हुने सम्भावना बढ्छ।
याे पनि पढ्नुस खानेपानीमा कोलिफर्म भेटियो
उभिएर पानी पिउँदा, पिएको पानी कलेजोमा व्यवस्थित हुन पाउँदैन। यसरी पिएको पानीले शरीरलाई कुनै फाईदा हुँदैन। शरीरले पानीबाट प्राप्त गर्न पर्ने कुनै पनि तत्व प्राप्त गर्दैन, केवल पसिना र पिसाबको रूपमा बाहिर निस्कन्छ।